Safal Khabar - चुरोटको धुँवाभन्दा अगरबत्तीको धुवाँ किन बढी खतरनाक हुन्छ ?
चुरोटको धुँवाभन्दा अगरबत्तीको धुवाँ किन बढी खतरनाक हुन्छ ?
आइतबार, ०१ बैशाख २०७६, १८ : ४९
एजेन्सी । हाम्रो धर्म र संस्कारमा अगरबत्तीको प्रयोग उल्लेखनीय रुपमा गरिन्छ । अगरबत्ती हजारौं वर्षदेखि प्रयोग गरिँदै आइएको छ । विशेष पूजाआजामा मात्र होइन, बिहान र बेलुका नियमितरुपमा अगरबत्ती सल्काउने अधिकांशको घरमा चलन नै हुन्छ ।
ब्रिटिश लङ्ग फाउन्डेसनका चिकित्सकीय सल्लाहकार डाक्टर निक रोबिन्सनले अध्ययनमाथि टिप्पणी गर्दै भनेका छन्, ‘धुपसहित कैयौं प्रकारका अगरबत्तीको धुँवा विषालु हुनसक्छ ।’यद्यपि, यो अध्ययन सानो परिणाममाथि गरिएको थियो । ४ वटा अगरबत्ती र एक चुरोटमा गरिएको तुलनात्मक अध्ययनबाट यस्तो निष्कर्ष निकालिएकोले यसलाई सहजै सामान्यीकरण भने गर्न सकिँदैन ।